Tontolon’ny fampiharan-dalàna : latsaka an-katerena ny fitsarana efa tratran’ny fahalovana | NewsMada
Tontolon’ny fampiharan-dalàna : latsaka an-katerena ny fitsarana efa tratran’ny fahalovana
Misy fiantraikany izao fitokonan’ny mpirakidraharaha sy ny mpandraharaha fonja izao… Latsaka an-katerena ny fitsarana, efa tratran’ny fahalovana.
Latsaka an-katerena tanteraka ny tontolon’ny fitsarana malagasy amin’izao fotoana izao. Eo aloha ny fitokonana faobe sy tsy manam-petra ataon’ny mpirakidraharaha sy ny mpandraharaha fonja, tarihin’ny sendikàny avy.
Tsy vitan’izany, manampy trotraka: manambana hanao fitokonana koa ny vadintany. Antony ny hoe fitsabahan’ny olom-boafidy amin’ny asan’izy ireo. Vao mainka mitombo amin’izany ny tsy fahatokisan’ny vahoaka ifotony ny fitsarana.
Vokatr’izany, ahina hitombo ny fitsaram-bahoaka etsy sy eroa. Tsy afa-miakatra fitsarana izao na azo tanana am-ponja vonjimaika ny olon-dratsy. Mampitaraina ny fianakavian’ny voatana vonjimaika tokony hotsaraina koa ny tsy famoahan’ny mpandraharaha fonja izany.
Eo hatrany ny tsy fahatokisan’ny vahoaka ny fitsarana
Anisan’ny sehatra mahabe fitarainana indrindra ny vahoaka ny fitsarana amin’ny fisiana kolikoly, araka ny tatitry ny Bianco taona vitsivitsy nisesy izay. Eo koa ny fanadihadian’ny Afrobaromètre ny amin’ny tsy fahatokisan’ny vahoaka ny fitsarana.
Zava-doza koa ny fitsabahan’ny fahefana mpanatanteraka ny fitsarana: lasa fitaovana politika. Izay mihetsika rehetra, soketaina lava amin’ny hoe manohintohina filaminam-bahoaka sy mitady hanongam-panjakana. Fitaovana enti-mandemy sy mamoritra amin’izany ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana.
Ao anaty fahalovana ny fitsarana
Maro ny anton’ny tsy fetezan’ny asam-pitsarana noho ny fitarazohana sy ny kolikoly. Lehibe indrindra amin’izany ny fahalovana sy ny akamakama ataon’ny mpikambana sasany ao amin’ny Filankevitra ambony momba ny fitsarana (CSM) natao hitantana ny asan’ny mpitsara, raha ny trakta niely eny amin’ny fitsarana, Anosy, nanomboka ny 8 avrily lasa teo, ohatra.
Anisan’izany fahalovana izany, ohatra, ny tsy fanajan’ny CSM ny sata mifehy ny mpitsara momba ny fiakarana grady sy ny famindran-toerana, ny fanendrena filoham-pitsarana sy lehiben’ny fampanoavana. Namorona fepetra vaovao tsy voafaritry ny sata mifehy ny mpitsara ny CSM mba hijerena tavan’olona.
Mpitsara no nanoratra ny trakta? Mahalala tsara ny tontolon’ny fitsarana… Na ny mpitsara aza izany, velon-taraina. Vao mainka ny olom-pirenena tsotra… Misy mihaino?